Myanmar Open Engineering E-book Collection
ကျွန်တော် ရေးသားခဲ့သော ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး စာတမ်းငယ်များ၊ ဆောင်းပါးများဖြစ်ပါတယ်
DivShare File - 001A-Метод управления се.pdf
ဒီစာတမ်းလေးကို ပထမဆုံးရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းက ဆီမီနာအတွက် အနှစ်ချုပ်တင်ရတာပါ။ ဒီမှာ ထုံးစံက စာတမ်းတိုလေးကို အရင်တင်ပြီး စာအုပ်ထွက်တဲ့ အချိန်မှာ စာတမ်းဖတ်ရပါတယ်။ စာတမ်းက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောရတာက အဓိကပါ။ ကျွန်တော် စာသင်တာ ၄ လပဲရှိသေးလို့ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
DivShare File - 002A-influence of input voltage waveform.pdf
ဒုတိယ စာတမ်းက 2006 မှာ ကျင်းပတဲ့ ICEEE ရဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် ကွန်ဖရင့်ကို တင်သွင်းတဲ့ စာတမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယူကရိန်း က ကရိုင်းမီးယားမှာ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့ မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
Публикация:ICEEE - 2006 XI-я Международная конференция Электромеханика, электротехнологии, электротехнические материалы и компоненты , Труды Часть 1, 18-23 сентября 2006г. Крым, Алушта.
DivShare File - 003A- фазной системы коо�.pdf
ကျောင်းက ဆီမီနာအတွက် အနှစ်ချုပ်တင်ရတာပါပဲ။ 3-phase mathematical modeling အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
DivShare File - 004A-Мощинский Ю А phase model.pdf
ဒီဆောင်းပါးလေးက လုပ်ခဲ့ သမျှတွေထဲမှာ အားအရဆုံးပါ။ ဖရီကွင်စီ-ကွန်ထရိုး အင်ဒတ်ရှင်းမော်တာတွေကို ဒိုင်းနမစ် အခြေအနေလေ့လာဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့၊ လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့ mathematical model အသစ် တစ်ခုကို ဆရာ့ အကူအညီ များစွာနဲ့ အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှမှာ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ အလက်သရီ ချက်စသဘာ နည်းပညာဂျာနယ်မှာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့် ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒီစာတမ်းကြောင့်လဲ ပီအိပ်ခ်ျဒီ စာတမ်းဖတ်နိုင်ဖို့ သေချာသွားပါတယ်။
Публикация: Электричество 2007, №-11
DivShare File - 005A-THERMAL BEHAVIOR.pdf
ဒီစာတမ်းက မကြာခင်မှာ ထွက်ရှိမယ့် တန်းမြင့် ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Вестник МЭИ မှာ တင်သွင်း ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
DivShare File - 006A-Harmonic effect on temperature.pdf
DivShare File - 007A-S4 thermal analysis.pdf
ဒီစာတမ်း ၂ စောင်ကတော့ 28-2-2008 မှာပြုလုပ်မယ့် ကျောင်းကွန်ဖရင့် အတွက် အနှစ်ချုပ်ရေးသားထားချက်များဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေးသားထားသော စာတမ်းများမှ လိုအပ်ချက်များကို တွေ့ရှိပါက ထောက်ပြ ပြင်ဆင်ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံ လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ စာတမ်းများအားလုံးကို တက်သုတ်ရိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ ရသဖြင့် အမှားများစွာ ပါရှိနေသည်ကို သိရှိရပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းအမှားများ ပုံများတွင်မှားနေခြင်းများ ရှိပါတယ်။ သီးခံ ဖတ်ရှုကြပါခင်ဗျာ။
Electrical and Engineering E-books collection
Matlab E-books collection
Russian E-books collection